Edere site Tranquillus | Feb 10, 2022 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Onye ọrụ na-enweta nkwụghachi maka ọrụ ya ma ọ bụ ọrụ ya, ụgwọ ọnwa. Nke a bụ nnukwu ụgwọ ọnwa. Ọ ga-akwụrịrị onyinye nke a ga-ewepụ ozugbo na ụgwọ ọnwa ya. Ego ọ ga-enweta n'ezie bụ ụgwọ ụgbụ.
Ya bụ ịsị: Nnukwu ụgwọ ọnwa obere onyinye = ụgwọ ọnwa.
Iji mee nke ọma karị, nke a bụ ka esi agbakọ ụgwọ ọnwa:
Ọnụ ego ụgwọ ọnwa bụ ọnụọgụ awa a na-arụ ọrụ na-abawanye site na ọnụego elekere. Ị ga-atụkwasịrịrị oge ngafe ọ bụla, ego ego, ma ọ bụ kọmishọna nke onye were gị n'ọrụ wepụtara n'efu.
Onyinye ndị ọrụ bụ mwepu a na-enweta site na ụgwọ ọnwa na nke ga-eme ka o kwe omume ị nweta ego enyemaka ọha:
Ụgwọ ezumike nka nkwado
mkpuchi ahụike, ịmụ nwa na ọnwụ
Ihe mberede ọrụ
mkpuchi ego ezumike nka
Onye ọrụ ọ bụla na-akwụ ụgwọ ndị a: onye ọrụ, onye ọrụ ma ọ bụ onye njikwa. Site na ịgbakwunye ha, ha na-anọchi anya ihe dịka 23 ruo 25% nke ụgwọ ọnwa. Ụlọ ọrụ ahụ na-akwụkwa otu onyinye ndị a n'akụkụ ya, ọ bụ òkè nke onye ọrụ. Onyinye nke onye were ya n'ọrụ bụ nke sitere na ụlọ ọrụ niile ma ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọrụ nka, ọrụ ugbo ma ọ bụ na-emesapụ aka. Onye were ya n'ọrụ na-akwụ ndị URSSAF òkè abụọ a.
Usoro mgbako a dịkwa irè maka ndị ọrụ nwa oge. Ha ga-akwụ otu onyinye, mana n'ogo oge ọrụ ha.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, a ngụkọta oge bụ nnọọ mgbagwoju, n'ihi na ọ ga-adabere n'ụdị ụlọ ọrụ nke ị na-arụ ọrụ na gị ọnọdụ.
Ụgwọ ụgbụ ahụ na-anọchi anya nnukwu ụgwọ ọnwa ewepụrụ na ntinye aka. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ewepụ ụtụ isi ego ọzọ. Ọnụ ego a ga-akwụ gị bụ nke a na-akpọ ụgwọ ụgbụ a ga-akwụ.
Na nchịkọta, nnukwu ụgwọ ọnwa bụ ụgwọ ọnwa tupu ụtụ isi na ụgwọ ụgbụ bụ nke enwetara ozugbo ewepụrụ ụgwọ niile.
Onyinye sitere n'aka ndị ọrụ obodo dị obere. Ha na-anọchi anya ihe dịka 15% nke oke ụgwọ ọnwa (kama 23 ruo 25% na ngalaba nkeonwe).
Na maka ndị nkuzi?
Ụgwọ ọnwa onye na-amụ ọrụ dị iche na nke onye ọrụ. N'ezie, ọ na-enweta ụgwọ ọrụ dịka afọ ndụ ya na ogo ya n'ime ụlọ ọrụ ahụ si dị. Ọ na-enweta pasentị nke SMIC.
Ndị na-eto eto na-erubeghị afọ 26 na nkwekọrịta ọrụ agaghị akwụ ụgwọ. Ọnụ ego ụgwọ ọnwa ga-adị nhata na ụgwọ ụgbụ.
Ọ bụrụ na nnukwu ụgwọ ọnwa nke onye mmụta dị elu karịa 79% nke SMIC, onyinye a ga-abụ naanị n'akụkụ nke gafere 79%.
N'ihi na internship contracts
A na-ewe ọtụtụ ndị na-eto eto n'ọrụ n'ọrụ ọzụzụ, ọ bụghịkwa ụgwọ ọnwa, kama ọ bụ ihe a na-akpọ gratuity internship. A gụpụkwa nke a na ntinye aka ma ọ bụrụ na ọ gafereghị ego nchekwa Social Security. E wezụga nke ahụ, ọ ga-akwụ ụgwọ ụfọdụ.
Ka anyị ghara ichefu ndị anyị lagoro ezumike nka
Anyị na-ekwukwa maka nnukwu ụgwọ ezumike nka na ụgwọ ezumike nka net maka ndị lara ezumike nka ebe ọ bụ na ha na-atụnye ụtụ ma nọrọ n'okpuru onyinye nchekwa ọha ndị a:
CSG (Ntụnye aka ọha zuru oke)
CRDS (Ntụnye aka maka nkwụghachi ụgwọ nke Social Debt)
CASA (Ntụnye aka ịdị n'otu ndị ọzọ maka nnwere onwe)
Nke a na-anọchi anya 10% dabere na ọrụ ị nwere: onye ọrụ, onye ọrụ ma ọ bụ onye isi.
Nnukwu ụgwọ ezumike nka mwepu onyinye na-aghọ ụgwọ ezumike nka ụgbụ. Nke a bụ ego ole ị ga-anakọta na akaụntụ ụlọ akụ gị.
Ụgwọ ọnwa na ụgbụ nke ndị isi
Mgbe ị nwere ọkwa onye isi, ọnụọgụ onyinye dị elu karịa nke onye ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ. Ọ dị mkpa n'ezie ịgbakwunye echiche ole na ole ndị a:
Pasent e wepụrụ maka ụgwọ ezumike nka dị elu
Ntinye aka na APEC (Association for Employment of Executives)
Onyinye CET (Ntụnye aka pụrụiche na nwa oge)
Ya mere, maka ndị isi, ọdịiche dị n'etiti nnukwu ụgwọ ọnwa na ụgwọ net dị elu karịa ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ọkwa ọzọ.
Tebụl dị ntakịrị, doro anya na-akọwara gị n'ọnụ ọgụgụ ole na ole yana n'ụzọ doro anya ọdịiche dị n'etiti nnukwu ụgwọ ọnwa na ụgwọ ụgbụ nke ụdị ọkachamara dị iche iche. Ọ ga-aba uru maka nghọta ka mma:
Atiya Ụgwọ ụgwọ Ọnụ ego ọnwa kwa ọnwa Ụgwọ netwọk kwa ọnwa
Ihe nzuzo 25% €1 €1
Na-abụghị onye ọrụ 23% €1 €1
Liberal 27% €1 €1
Ọrụ Ọha 15% €1 €1
Kedu ihe dị iche n'etiti ụgwọ ọnwa na nnukwu ụgwọ ọnwa? Ọnwa Abụọ 10, 2022Tranquillus
gara agaOnye na-eto eto 1, 1 ngwọta ngwọta na-emeju ya na ngalaba nke a raara nye Europe
-esonụỌrịa Na-efe efe nke Mmiri
Nchekwa ọha na eze na ikike nke ndị ọrụ ezigara na France